ကီဝိသီးသည် သစ်သီးထဲတွင် `အသီးဘုရင်’ဟုအသိမှတ်ပြုကြသည်၊သစ်သီးထဲတွင်ဗီတာမင်C ဓါတ်အများဆုံး
ပါဝင်သည်။ဗီတာမင် C နှင့် ဗီတာမင် E ပါဝင်ပေါင်းစပ်ထားသည်သောကြောင့် အသားရေကိုလှပစေသည်၊
Oxidant ကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းနှင့် ဖြူစင်တောက်ပစေသော အရည်အသွေးရှိသည်၊တင်းတိတ်ကိုလည်းဖယ်ရှား
ပေးပြီး ဝက်ခြံထွက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့် အသားရေမှအိုမင်းယွန်းရော့ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသော
Functionရှိသည်။MACO လက်မှုပညာရှင်၏ ထူးခြားသောဖန်တီးမှု၊အဖိုးတန်စသစ်သီးအဆီနှင့် ထောပတ်အဆီ
များပါဝင်ပေါင်းစပ်ထားပြီး တောရိုင်းကျင်းဖြူပန်းဆီနှင့် အခြားပစ္စည်းများပါဝင်သည်၊အထဲကိုဝှက်သော ကနေ
ပါဝင်ပစ္စည်း။ ။အုန်းဆီ၊ထန်းဆီ၊ Prunus Amygdalus Dulcis Oil၊ထောပတ်သီးဆီ၊ Shea Butter ၊
Tea Tree essential Oil ၊ Hedychium coronarium essential Oil ၊ Citrus Aurantium Amara essential Oil ၊ Actinidia chinensis Juice
သတိထားရန်။ ။ ၁။ နေရောင်တိုက်မထိုးမိသောနေရာတွင်ထားပါ။
Kiwifruit is known as the “king of fruits”, and has one of the highest vitamin C contents among all fruits. While it is self-evident that vitamin C and vitamin E can beautify the skin, they also have anti-oxidant and whitening qualities, as well as the ability to eliminate freckles and acne and enhance the skin’s anti-aging functions. A unique creation from MACO artisans, combining precious fruit oils with shea butter to formabalanced texture, as well as wild white ginger flower oil and others, hidden inside like dancing white butterflies, an exquisite fragrance for you to enjoy.
Ingredient: Coconut Oil，Palm Oil，Prunus Amygdalus Dulcis Oil，Avocado Oil，Shea Butter， Tea Tree essential Oil，Hedychium coronarium essential Oil，Citrus Aurantium Amara essential Oil，Actinidia chinensis Juice
Product Code: MSP1-COS-03-004(NKS)